Banyere Anyị - Goodao Technology Co., Ltd.
Onye na-ebunye taya
Digital taya inflator
Onye na-ebufe w/Ìhè
Igwe ihe na-eme taya ígwè
Ụgbọ ala ikuku Compressor
Taya inflator maka ọgba tum tum eletrik
Ọwa na oriọna
Ngwungwu ndozi taya taya
Ngwa ndozi taya taya
Ihe nlele taya
Vacuum ụgbọ ala
Yuyao Jiaqiao Auto Accessories Co., Ltd. bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka imepụta ụdị 12VDC ụgbọ ala ikuku compressor (ụgbọ ala taya inflator), nhicha ụgbọ ala, ngwa mberede okporo ụzọ na ngwa, wdg Ọ dị n'ebe ọwụwa anyanwụ nke mpaghara Zhejiang - Yuyao obodo nke na-anya otu awa site na ọdụ ụgbọ elu Ningbo Lishe (Ningbo Port), yana awa 2 na-esi Hangzhou ma ọ bụ Shanghai. Ụlọ ọrụ na-ekpuchi mpaghara 1500 square mita yana ndị ọrụ 80, ngwaahịa na-ebupụ na ụwa niile na ọtụtụ akwụkwọ ntinye mba dị ka CE, RoHS, wdg.
Dị ka otu n'ime ndị na-eduga na ọkachamara factory, dabere na àgwà amụma nke "àgwà gbakwasara, ahịa mbụ", anyị eguzobewo a kpọmkwem na ukwuu oru oma àgwà akara usoro. ISO 9001: 2000 Asambodo Sistemụ Njikwa ogo ka enwetara na 2006.
Iji welie uru ịma aka dị na asọmpi ọnụahịa zuru ụwa ọnụ ma jikwaa ịdịmma nke ọma, anyị mepụtara ogbako Harware nke anyị, nkuzi moto, nkuzi ịgba ntụtụ, nkuzi ịgbakọta, na nkuzi ịkpụzi. Ọtụtụ n'ime isi akụkụ nke anyị ngwaahịa na-emepụta na anyị factory, niile dechara ngwaahịa na-abịa site anyị mgbakọ Lines.With ndị a ọkachamara mmepụta ngwá na magburu onwe R & D otu, anyị mmepụta ikike esịmde 50,000 PC ikuku compressor ma ọ bụ agụụ Cleaners kwa ọnwa. Anyị guzobekwara ụlọ ọrụ njikwa mma nke anyị, otu mmepe ngwaahịa.
Ka ọ dị ugbu a, iji welie uru ịma aka na akụ na ụba zuru ụwa ọnụ nke ezigbo ọrụ, dabere na ịgafe asambodo sistemụ njikwa njikwa ISO9001, ụlọ ọrụ nakweere ERP, OA na sistemụ azụmaahịa E-azụmahịa. Anyị ga-aga n'ihu na-ewebata nkà na ụzụ dị elu nke ụlọ na nke mba ọzọ na njikwa njikwa, ma na-agbalịsi ike ịkwalite àgwà ngwaahịa na asọmpi. Ọtụtụ ngwaahịa anyị nwere asambodo mba ụwa ugbu a.
ADERENọmba 1279 Tanjialing West Road, Lanjiang Street, Yuyao, Zhejiang, China